सम्बन्ध–६ (एक बिहान) | मझेरी डट कम
सम्बन्ध–६ (एक बिहान)
editor — Sun, 04/03/2016 - 23:48
म साविक वमोजिम मोर्निङ्ग वाकबाट फर्के, पस्दा पस्दै वैठक कोठामा यौटी महिलालाई देखेँ । मलाई लाग्यो – उनी मलाई नै पर्खिरहेकी छिन् । मेरो मनमा हुरी आयो – को हुन् यी । के कामले आइन् । म भित्र नपस्दै उनले भनिन् – म तपाईलाई भेट्न पर्खिरहेकी छु । एक घण्टा भयो । तपाईको त मोर्निङ्ग वाक पनि कत्ति लामो हो ?
“यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने मलाई के थाहा? तर मैले त राम्ररी चिन्न सकिन नि !” वास्तवमा म कसरी चिनुँ । जागिरको लामो यात्रामा कत्ति मान्छेहरूसँग भेट भयो । कत्तिपय घटना दूर्घटना भए ।
“तिमीले मलाई बिर्सन मिल्दैन किरण ।” ऊ अब तिमीमा ओर्ली –“एउटै अफिसमा एउटै टेवलमा काम गरेकी म सुभद्रालाई बिर्सेर बस्न मिल्छ? ” उसको स्वर अस्वभाविक लाग्यो, अर्थात कहीं रुन्चेपन मिसिएको ।
“ म काठमाडौंमा नै छु र यही महाराजगन्जको पुरानो घरमा छु भन्ने तिमीले कसरी थाहा पायौं सुभद्रा । फेरि मैले सरकारी जागिर छाडेको पनि दस वर्ष भइसक्यो ।”
श्रीमतीले चिया र बिस्कुट ल्याइन् । हामी दुवै फेरि फ्लैसव्याकमा पुग्यौं । धेरै पुरानो साथीसँग पुरानो कुरा गर्न पनि एक किसिमले रमाइलो हुँदो रहेछ । ‘हाम्रो डाइरेक्टर बाँचेकै छन् कि ....।’
‘प्रदिप डाइरेक्टर साहेब गएको पाँच सात वर्ष भइसक्यो ।’ उसका आँखाहरू बिस्तारै तरल भएर आए । मैले मार्क गरिरहें ।
“अमेरिका गएको थियो । यौटा मोटर एक्सिडेन्टमा परेर गयो ।” अब उसका आँखामा आँसु देखा पर्न लागे । ऊ ह्वाँ ह्वाँ नै रुन लागि ।
मैले संझाए –“अब रोएर तिम्रो छोरा आउँदैन सुभद्रा, जीवनमा धैर्य गर्न आवश्यक छ । यहाँ सधैंँ बस्ने को छ र ! एक दिन सबैले यो धरती छाड्नै पर्छ ।”
“मेरो यौटा छोरा र यौटी छोरी हुन् । अहिले दुवै अमेरिकामा छन् । यो देशमा त को बस्ने भयो र! बूढा–बूढी र केटाकेटी वाहेक ।” मैले सबै नेपालीहरूले भोग्नु परेको ब्यथा सुनाएँ ।
“सो त हो । मेरो छोरा मर्नासाथ मलाई लोग्नेले पनि छाडिदियो, अर्की ल्याइदियो । म बेजातकी भएँ रे । मेरो दुक्ख र पीडाको लामो कहानी छ किरण ! के सुनाऊँ, के नसुनाऊँ । मलाई भगवान्ले पिडै–पीडामा बाँच्न लेखिदिएका रहेछन् । मैले जत्ति दुक्ख यस संसारमा अरु कसले पाएको होला र !” – ऊ फेरि ह्वाँ ह्वाँ रुन लागि । मलाई धेरै असहज महसुस भयो ।
“फेरि मैले पनि दोस्रो बिहे गरें । त्यसले कुनै स्वास्नीमान्छे पाउँदा मैले पनि कुनै लोग्नेमान्छे पाउन सक्छु भन्ने उसलाई देखाउनु थियो, यो समाजलाई देखाउनु थियो । तर .............. ” फेरि वाक्य फुटेन । उसको गला अड्के जस्तो भयो । म भित्र पनि स्नेह र श्रद्धाको फूल फुल्नु स्वभाविक थियो ।
“एक पल्ट घर भत्केपछि जोडिन त गाहारो नै हुन्छ नि ! यो घर त भयो – तर कुनै बेला भुइँचालो आउन सक्छ । तिमीलाई के भनुँ – ऊ केही पनि गर्दैन । जुन ठाउँमा जागिर खाए पनि महिना दिनभन्दा बढी ऊ टिक्तैन । प्राइभेट जागिर –अलि कडिकडाउ त हुने नै भयो नि ! ऊ त सरकारी कर्मचारी जस्तो । हुन्छ ...हुन्छ हस्...हस् भन्ने, खालि चाकरी मात्र गर्ने । दिएको काम केही नगर्ने । बी.ए. पास भएर पनि के गर्नु ! सानै देखि बिग्रिएको केटो रहेछ ।”
“अनि तिम्रो घर ब्यवहार ! कसरी चलेको छ त ?”
श्रीमतीले भान्सा ठिक भएको जनाउ दिइसकी । सुभद्रा आफ्नो कुरा पनि टुंग्याउँदिन, जाने कुनै हत्तार पनि छैन । एक नास पीडाको कथा –ब्यथा सुनाउँछे । म भने नर्भस भइसकें के भनुँ – के नभनुँ । के हो भनौं, के होइन भनौं !
“त्यही जागिर खाएकिरहिछु । ८/१० हजार पेन्सन आउँछ । घर बहाल तिर्नु कि! खानपान गरौं कि ! यो बढ्दो महङ्गी तिमीलाई थाहैं छ । मलाई ऋणै ऋणको भारी छ । साहूहरूले टिक्न दिएका छैनन् । घरभाडा तिर्न नसकेको वर्ष दिन बढी भयो । लोग्ने भन्नेलाई कुनै कुराको मतलव छैन । सधैंँ टन्न भएर आउँछ । घरमा भात पाकेको छ भने खान्छ, नत्र सुत्छ ।”
“उहाँलाई पनि अहिलेको खाना यत्तै बनाउँ कि! तपाईलाई पनि कार्यक्रममा जान ढिला भएन ।” श्रीमती आजित भई, मलाई थाहा छ । तर कहिले कहीं यस्ता सम्बन्धहरूले कठिन स्थिति ल्याउँदा रहेछन् । यस्तो मलाई धेरै पटक अनुभव भएको छ ।
“साँच्ची मलाई खाना खाएर यौटा कार्यक्रममा पनि जानु छ । पछि भेटौंला, अहिले छुटुँ है !” मैले बिदा लिन चाहें ।
“म यहाँ खाना खान आएको होइन किरण! म तिमीसँग सहयोग पाइने आसाले आएको । कुनै बेला एउटै अफिसमा काम गरेका हामी । तिमीले दिन दुईगुणा, रात चौगुणा प्रगति गरेको कुरा सुनेर तिमीसँग हात थाप्न आएको !” फेरि ऊ सुकसुकाउन थाली ।
“तिमीले सुन्नु, हल्लाका कुरामा विश्वास गर्नु यौटा कुरा हो । पहिलेभन्दा केही प्रगति निश्चय नै गरेको छु । मेरो दुक्ख तिमीलाई के सुनाउँ! अहिले अमेरिकामा छोरा–छोरी पढाउँदाको मेरो पीडा कसले बुझ्ने ! तिनले त्यहाँ संधै काम पाउने होइनन्, फेरि पढाइसँगै खट्न पनि त गाहारो नि !तिमीलाई जस्तै म पनि ब्यवहारले बाँधिएको छु । आखिर भनन ! म के कस्तो सहयोग गरुँ ! .....” म उठिसकें । तर ऊ उठिन । आफ्नो आउनुको यथार्थ खोली– मलाई एकलाखको अत्यन्त खाँचो छ । म तिमीलाई हातजोड्छु .......”
“भई गो – म ७५ हजारले काम चलाउँछु । त्यत्तिले त पूरा मेरो काम चल्दैन, तैपनि प्रयास गर्छु । अर्थात टालटुलसम्म हुन्छ ।”
अब म के गरुँ ! कुनै बाढीमा अकस्मात् डुबे जस्तो भयो । मैले पकेटवाट पाँच हजारको नोट निकालेर उसको हातमा राखीदिएँ –लौ मैले सक्ने यत्ति हो । म थप केही गर्न सक्तीन । मलाई माफ राख सुभद्रा ! तिमीले पनि मेरो स्थिति बुझिदेऊ ।
अब ऊ जुरुक्क उठी र पाँच हजारको नोट वैठकमा फालिदिई । अनि कसैको अनुहार नहेरी जान्छु समेत नभनी ढोका खोलेर निस्की । मैले ए सुभद्रा ! सुभद्रा !! भनेको पनि सुनिन, सुन्न चाहिन ।
बिकासको बिउ (लघु-कथा)
पिरतीका चिनोहरु जलाएर जाऊ बिन्ती
भुलेका कथा तिता मीठा
तेजपुरको सेरोफेरो र ब्रहृमपुत्रको घेरो